Hamarino ny fanamafisam-peo sy ny fisintonana meltdown ao amin'ny Windows | WebSetNet
Home/System Admin/Windows/Hamarino ny fihenan'ny fikolokoloana sy ny meltdown ao amin'ny Windows
Hamarino ny fihenan'ny fikolokoloana sy ny meltdown ao amin'ny Windows
AaronStuart Oct 9, 2018
0 364 Novaina ny 1
SpecuCheck dia rindrambaiko open source ho an'ireo Windows Windows fitaovana izay mampiseho ny toetran'ny fikolokoloana mivaingana sy meltdown ao amin'ny rafitra ito azy.
Amin'ny ankapobeny dia mamerina ny fepetran'ny rindrambaiko sy ny fiarovana amin'ny alàlan'ny CVE-2017-5754 (Meltdown), CVE-2017-5715 (Specter v2), CVE-2018-3260 (Foreshadow), ary CVE-2018-3639 (Specter v4).
SpecuCheck dia fitaovana enti-manondro baiko izay mamerina ny toetry ny fihenanam-bidy manoloana ireo vulnerabilities voatanisa.
Ny mpampiasa sasany dia mety hiverin-dàlana amin'ny alàlan'ny laharam-baovaon'ny baiko; Mora ny mampiasa izany, na izany aza, ary tsy mitaky tombontsoa ambony.
Fanamarihana: Ny mpandrindra dia manome soso-kevitra fa mampiasa ny PowerPoint CmdLet an'ny Microsoft ny mpampiasa raha toa ka afaka manamarina ny toe-pahasalamana sy ny SpecuCheck ihany izy ireo amin'ny fanamarinana na fikarohana.
Ny zava-drehetra tokony hataonao dia ny hazakazaka specucheck.exe amin'ny baikon'ny baiko mba hahazoana fanazavana miverimberina. Ny vokatra dia voatatitra; Ny fampahalalana manan-danja indrindra dia ny fisoratana anarana amin'ny alàlan'ny famindrana na tsia.
Ireo mpampiasa na mpanadina izay mahita "Ny rafitrao dia tsy manana ny patch mety, na mety tsy mahazaka ny kilasy fampahalalam-baovao" dia tokony hihaino tsara rehefa manondro fa ny rafi-pandaminana dia mora vidy ary tsy voafehy araka ny tokony ho izy mba hanalefahana ny fahavoazana voapetraka.
[SpecuCheck] dia mampiasa kilasy fampahalalana vaovao roa izay nampidirina amin'ny antso NtQuerySystemInformation API ho toy ny ampahany amin'ny patches vao haingana nampidirina tamin'ny Janoary 2018 ary mitatitra ny angona asehon'ny Windows Kernel.
Ny fampiharana dia tsy manome fampahalalana na torolàlana hampiharana paty mba hiarovana ny rafi-pitomboana manoloana ny fahalemen'ny Spectter na ny Meltdown. Fanombohana tsara dia ny fitadiavana ny CVE amin'ny aterineto mba hahafantarana ny fomba famerenana sy fametrahana paty.
SpecuCheck dia tsy fitaovana voalohany hanamarinana raha toa ny rafi-pandaminana iray marefo sy manindry. Nandefa fitaovana PowerShell i Microsoft Jereo raha misy fiantraikany amin'ny PC ny Meltdown na ny mpilalao, ary misy koa InSpectre avy amin'ny Gibson Research izay manao toy izany koa.
SpecuCheck dia fitaovana ilaina hanaraha-maso haingana ny toetran'ny fikolokoloana sy ny meltdown amin'ny rafitra.
Raha toa ny soso-kevitra hampiasa ny fitaovana PowerShell amin'ny Microsoft mba hanamarinana ny fikarohana, dia manome ny mpampiasa sy ny mpitsidika amin'ny alalan'ny fanadihadiana fohy momba ny rafitry ny rafitra ny SpecuCheck.
The lahatsoratra Hamarino ny fihenan'ny fikolokoloana sy ny meltdown ao amin'ny Windows niseho voalohany tamin'ny gHacks Technology News.
Amboary ny PCN Windows 7 amin'ny famoahana ny SHA 2 March na raha misy loza mety hanjavona ny fandrakofan'ny fiarovana Microsoft
Manova rakitra mipetaka amin'ny andro ofisialy ao amin'ny Windows 10
Ny Sary famoahana sary mila ilainao amin'ny PC Windows
Ny fomba fiasan'ny Windows Sandbox config
Ahoana no hamafa ireo famandrihana Downloaded, Notsipahiko & ampahany amin'ny Windows Updates
Navoakan'i Microsoft Windows 10 (RS5) Preview Build 17711
Ahoana no mitantana ny Chrome amin'ny alàlan'ny politikan'ny vondrona Windows
Atsofohy Windows Vista amin'ny fametrahana fanavaozana Windows Server 2008
Ny vulnerabilities and Exposures Security rafitra Meltdown Microsoft Windows Famonoana nokleary Patch (informatika) Specter Vulnerability (informatika)